Ukwelashwa kwe-Atopic Dermatitis - Global Allergy & Airways Patient Platform
Ikhaya>Ukwelashwa kwe-Atopic Dermatitis
Ukwelashwa kwe-Atopic DermatitisIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-05-31T11:02:35+02:00
Alukho unyango olujwayelekile lwazo zonke iziguli ezine dermatitis ye-atopic. Isiguli ngasinye kufanele siphathwe ngazodwana.
Ngakho-ke, futhi akukho kuphela ukwelashwa okungenzeka kwe-atopic dermatitis. Ukwelashwa kuqukethe izinto ezi-5:
Ukugwema izimbangela ze-atopic dermatitis
Okokuqala kubalulekile ukwazi ukuthi yini ebangela isiqephu se-atopic dermatitis. Lokhu kungaba izibungu zothuli, izinwele zezilwane, okokuhlanza noma okokuhlanza, ukudla, njll. ... Futhi isimo sezulu singadlala indima.
Ukuhlolwa okuhambisanayo kungenziwa kudokotela wesikhumba noma kumalabhorethri afanele.
Ukugwema ngokungaguquguquki kwe-trigger kuyisisekelo sokwelashwa kwe-eczema.
Isikhumba sidinga ukunakekelwa nsuku zonke ngamafutha okuthambisa nawokuphindisela amafutha noma okokugcoba okungokwemvelo futhi okungenazo izinto zokubulala.
Imikhiqizo ye-PH engathathi hlangothi ikhetha ukuhlanza isikhumba.
Izithasiselo eziningi ezivamile zokugeza noma ama-gels eshawa aphula isikhumba umgoqo waso wokuvikela. Ngakho-ke lokhu kugwenywa kangcono. Okufanayo kusebenza kuzinsipho eziwuketshezi kanye nama-surfactants. Usawoti njengesengezo sebhavu ungasiza ukubopha amanzi esikhunjeni futhi uwenze uthambe kakhudlwana. Okusiza kakhulu ukubuyisela ama-gels eshawa namafutha okugeza.
Ngemuva kokugeza noma ukugeza, isikhumba akufanele sigcotshwe somile. Mane nje wome kancane noma uyidabhe yomile. Masinyane ngemuva kokugeza noma ukugeza, gcoba umkhiqizo wokunakekelwa owutholile odokotela noma usokhemisi owusebenzisa nsuku zonke.
Ukulunywa kuyadabukisa ku-atopic dermatitis. Lapho iklwebheka ngokwengeziwe, kuba nokuvuvukala okwengeziwe. Lo ngumjikelezo ononya.
Ukugwema okungaguquki kuphela, ukunakekelwa kwesikhumba nokunamathela kuzincomo zokwelashwa zikadokotela okuzokwenza ngcono ukulunywa.
Gcina izipikili zezingane zifushane ngangokunokwenzeka ukugwema ukulimala. Esimeni esiphuthumayo, ungafaka futhi amagilavu ​​enganeni.
Kuyasiza futhi ukwelashwa kokugoqa okumanzi
Ngemuva kokwenza ukugeza okushisayo nokucwilisiwe nokufaka umuthi, isikhumba esilimele i-eczema sisongwa ngendwangu yezindwangu ezimanzi, ezifakwa kaningi ngezingubo ezomile - njengama-pajamas, i-sweatshirt noma amasokisi amashubhu.
Ukuvuvukala kuvame ukuphathwa ngamafutha wesikhumba nangemithi yohlelo.
Ukuvuvukala okumaphakathi kuya kokulingene kuvamise ukwelashwa ngamafutha okulwa nokuvuvukala kwe-cortisone. ICortisone inomphumela wokulwa nokuvuvukala futhi isetshenziselwa kakhulu iziqephu ezinzima. Ngenxa yemiphumela yaso emibi, i-cortisone kufanele isetshenziselwe kuphela isikhathi esifushane. Ngaphezu kwalokho, amalungiselelo aqukethe i-cortisone awafanelekile kuzo zonke izindawo zesikhumba (isib. Ubuso, indawo yesitho sangasese). Ngakho-ke, ama-calcineurin inhibitors kufanele asetshenziswe kulezi zindawo. Lawa makhilimu nawo anomthelela wokulwa nokuvuvukala.
Ngaphandle kokugcotshwa kwe-cortisone, le mikhiqizo elandelayo isetshenziselwa ukwelashwa kwe-atopic dermatitis.
Ukhilimu wePimecrolimus noma amafutha we-tacrolimus
Izimo ezinzima ze-atopic dermatitis ziphathwa ngemithi yesistimu.
Ngakolunye uhlangothi, ama-corticosteroids angabhalwa ngomlomo noma njengemijovo, kanti ngakolunye uhlangothi, kukhona okuthiwa ukwelashwa kwe-biologic, okusetshenziswa njenge-injection therapy.
I-Phototherapy ukwelashwa kwesikhumba ngemisebe ye-electromagnetic ikakhulu ebangeni le-ultraviolet (UV).
Imisebe ye-UVA ingena ijule esikhunjeni ngakho-ke futhi ingalwa nokugxila kokujula okujulile. Ukwelashwa kwemisebe ephezulu ye-UVA kungasetshenziselwa i-atopic eczema. Imisebe ephansi ye-UVA isetshenziswa ekwelashweni kwe-PUVA.
I-PUVA isho ukuthi umphumela wemisebe ye-UVA uyaqiniswa ngesithako sezidakamizwa esisebenzayo iPsoralen. I-Psoralen inikezwa isiguli ngamaphilisi, ngendlela yokugeza noma ngamafutha (uma kuthinteka kuphela izindawo zomzimba ezifana nezandla noma izinyawo). Inhlanganisela ye-Psoralen ne-UVA ikhombisile ukuthi iyasebenza kakhulu ezifweni eziningi zesikhumba, njengoba lokhu kwelashwa kunemiphumela eveziwe yokuvuvukala.
Uma kuqhathaniswa, ukwelashwa kwe-UVB kungena kuphela ezingxenyeni ezingaphezulu kwesikhumba. Le ndlela ye-irradiation ifana nokukhanya kwelanga kwemvelo. Ukwelashwa okumsulwa kwe-UVB kulula kakhulu ukukwenza, kunemiphumela emibi embalwa (kungasetshenziswa nakwabesifazane abakhulelwe, ezinganeni noma ezigulini ezinomlando wamathumba) futhi kusebenza ngokufana nokwelashwa kwe-PUVA kwezifo zesikhumba eziningi. Ngaphezu kokucindezela izinqubo zesikhumba ezivuthayo, wonke ama-phototherapies nawo aholela ekusukeni kwesikhumba.
Ezifundweni zokuqeqeshwa kwe-atopic dermatitis, iziguli zifunda ukuthi zingabhekana kanjani nalesi sifo empilweni yansuku zonke nasemsebenzini. Imininingwane kanye namathiphu asebenzayo okunakekelwa okufanele kwesikhumba, ukudla okunomsoco, ukubhekana nokubuyela emuva noma amasu okuphumula anikezwa.
Ukuvuselelwa kungacatshangelwa i-eczema enamandla kanye nenkambo yalesi sifo ngaphandle kwanoma yiziphi izikhathi ezingenazimpawu. Inhloso lapha ukwenza ngcono ukwelashwa ukuze ukwazi ukuqhubeka nokusebenza.
Imvamisa i-eczema nokunwaya kuholela ezinkingeni zokulala, ezingabeka nobunzima bengqondo esigulini. Ukuzivocavoca kokuphumula kuvame ukusiza lapha. Uma izikhalazo ezingokwengqondo zimenyezelwa, ukwelashwa kwengqondo nakho kungaba inketho.